युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालय | कर्जा लिने प्रक्रिया
कोषले तयार गरेकोे आशय पत्रको ढाँचा अनुसार कोषवाट व्यक्तिहरुलाई प्रस्ताव आव्हान गरिनेछ ।
कोषले तयार गरेको कर्जा प्रस्तावको सूचना अनुसार वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरुलाई कर्जा प्रस्ताव आव्हान गर्नेछ ।
प्राप्त प्रस्तावहरू ऋण लगानी गर्न कोषले छनौंट गरी स्वीकृत गर्नेछ ।
कोषले बैंक, वित्तीय संस्थालाई बढीमा रु. ५ करोडसम्म र सहकारी संस्थालाई बढीमा रु. १ करोडसम्म कर्जा दिन सक्नेछ ।
कोष र वित्तीय संस्था एवंम सहकारी संस्था बीच सम्झौता भएको रकमलाई कोषले वित्तीय संस्था एवंम सहकारी संस्थालाई पहिलो किस्ता ५०%, दोस्रो किस्ता ५०% गरी दुई किस्तामा वा आवश्यकताको आधारमा एउटै किस्तामा उपलब्ध गराइनेछ ।
आषय पत्र अनुसार वित्तीय संस्था एवंम सहकारी संस्थाले व्यक्तिलाई बढीमा रु.२ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
समूहगत लगानी गर्नको लागि बढीमा १५ जनाको समूहमा प्रतिव्यक्ति रु.२ लाखभन्दा नबढ्ने गरी वित्तीय संस्था एवंम सहकारी संस्थाले सामूहिक रु.३० लाखसम्म लगानी गर्न सक्नेछ ।
कोषबाट संस्थाको खातामा जम्मा भएको मितिले व्यवसायको आधारमा बढीमा १ बर्षको गे्रस अबधि दिइनेछ ।
बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले परियोजनाको आधारमा कोषलाई बढीमा ५ बर्ष भित्र कर्जा भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ ।
वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले कोषलाई त्रैमासिक किस्ता अनुसार साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
१८ वर्ष पूरा भई ६० वर्ष सम्मका लक्षित नेपाली नागरिकहरु यस कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन् ।